The constitutions of Burma 2008 hi hrawh asi cang ko tiah kan ti kho hnga maw, – Hakha Cherry
The constitutions of Burma 2008 hi hrawh asi cang ko tiah kan ti kho hnga maw,
The constitutions of Burma 2008 hi hrawh asi cang ko tiah kan ti kho hnga maw, hrawhasi cang ko ah cun 2020 Nov Election le MP zong hrawh an si ve ko cang lo maw?
Ziahatu Dirh mi Bu pawl pohpoh khi 2020 Nov thimnak ahachuah mi,mipi aiawhtu MP hna nih fonh in(Zuaikoh khan kuzale mia kak) dirh mi asi ti peng asi hnga?
2020 thimnak ah ai tel lo mi zong nihin ah hmaisuang inadir ii mipiadirkamh tu hna pawl khi (CNF telhchih in),Thim/telh awk an tha hnga lo maw?
CRPH le NUG nih khin maw kan ram pumpi akan tleih peng te hnga?Asiloah Federal union in kal sisehlaw 2020 Nov Electionatling mi MP nih maw an kan hruai than te hnga?Credit-Johnf Thawng
KIA nih ralkap sakhaan pawl an laak than, Lieutenant Colonel (Doh-Bohmugyi) tel in Officer rank 13 le ralkap tamlak an thi
Kachin Ramkulh Bhamo Pengkomh, Moemout Peng Myothit, Gonelaw, Nyuanlant, Dawhphoneyan, hrawng KIA brigade5hmunhma ni7chung kahdohnak inathi mi an si.
A thi mi hna hi Lieutenant Colonel Phyo Wai Linn (DSA-46), Colonel Phyo Aung Pwar (DSA-46), Captain rank (Bogyi) 4, Major (Bo)6an si i ralkap chungtel pawlathi mi zat cazin belte langhterasi rih lo. KhiThitMedia
ကချင်လွတ်လပ်​ရေးတပ်မ​တော် KIAက အကြမ်းဖက်စစ်​ကောင်စီ တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယ​နေ့ ထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး စစ်​ကောင်စီဘက်မှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင် အရာရှိ ၁၃ ဦးနှင့် တပ်သားအများအပြား ​သေဆုံးကြောင်း KIAကချင်သတင်းရင်းမြစ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် မိုးမောက်မြို့နယ်၊ မြို့သစ်၊ ကုန်းလော၊ နွမ်လန့် ၊ဒေါ့ဖုန်းယန်၊ အရှေ့ဘက်တောင်တန်းတစ်လျှောက် KIA တပ်မဟာ၅ နယ်မြေတွင် ၇ ရက် တိုက်ပွဲများအတွင်း စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်မှကျဆုံးသွားသောအရာရှိများမှာ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး ဖြိုးဝေလင်း DSA-(46)၊ ဗိုလ်မှူး ဖြိုးအောင်ပွား DSA-(46)
ဗိုလ်မှူး ဇင်မင်းထွဋ် DSA-(46) ၊ ဗိုလ်ကြီးအဆင့် ၄ ဦး၊ ဗိုလ်အဆင့် ၆ ဦး စုစု​ပေါင်း ၁၃ ဦး​သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းအတည်ပြု ရရှိ​ကြောင်း၊ အောက်ခြေစစ်သား​သေဆုံးစာရင်းမပါ​သေး​ကြောင်း ကချင်သတင်းရင်းမြစ်က ​​သတင်း​ဖော်ပြသည် The Hakha Times
Ka papa hi, miding mifelasi. Thil pakhat biakamhnakatuahmiahlaw bal lomi pasal thaasi.